Polyethylene glycol 20000 - zvivakwa Ichi chigadzirwa chichena machena machena. Inonyungudika mumvura, inosungunuka mune mamwe manyowa anonyungudika. Mhinduro yayo ine yakakwira viscosity pane yakadzika fungidziro, uye inogona kugadziriswa necalendering, extrusion uye kukanda. Iyo thermoplastic resin ine kuenderana kwakanaka nemamwe ma resini. Iyo inopesana nekukukurwa kwehutachiona uye ine husina kusimba humbozha hwemuchadenga. Polyethylene glycol 20000 - Standard Ichi chigadzirwa musanganiswa we ethylene oxide an ...
Polyethylene glycol 10000 - zvivakwa Ichi chigadzirwa chine chena granular zvinhu. Inonyungudika mumvura, inosungunuka mune mamwe manyowa anonyungudika. Mhinduro yayo ine yakakwira viscosity pane yakadzika fungidziro, uye inogona kugadziriswa necalendering, extrusion uye kukanda. Iyo thermoplastic resin ine kuenderana kwakanaka nemamwe ma resini. Iyo inopesana nekukukurwa kwehutachiona uye ine husina kusimba humbozha hwemuchadenga. Polyethylene glycol 10000 - Yakajairwa Ichi chigadzirwa musanganiswa we ethylene oxide an ...
Polyethylene glycol 6000 inogadzirirwa nepolimerization yemvura ethylene glycol pakudziya kwepamusoro, kumanikidza zvakanyanya kana kumanikidza kwakaderera. Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Chirungu Zita: macrogol 6000-992 ichi chigadzirwa musanganiswa weethylene oxide uye mvura polycondensation, iyo molekyura fomula ndeye ho (CH2CH2O) NH, uko n inomiririra avhareji nhamba ye oxyvinyls. hunhu Ichi chigadzirwa chena waxy solid flake kana granular poda, inonhuwirira zvishoma. Chigadzirwa chinonyungudika mumvura kana ethan ...
Polyethylene glycol 3350 - inoshandisa Poly (ethylene oxide) resin yakakwira mamorekuru uremu homopolymer inoumbwa nemhete yekuvhura polymerization ye ethylene oxide neakakanganisika catalysis. Iyo yekutanga inonzi polyethylene glycol uye yekupedzisira inonzi polyoxyethylene. Polyethylene oxide (PEO) ine zvimiro zve flocculation, kuomesa, kunonoka kuburitsa, lubrication, kupararira, kuchengetedza uye kuchengetedza kwemvura. Iyo inokodzera mushonga, kemikari fetiraiza, kugadzira mapepa, zviumbwa, sipo, cos ...
Polyethylene glycol ine zvivakwa zvakasiyana zvinoenderana nehuremu hwayo, kutangira pane isina kuchena uye isina hwema viscous mvura kune waxy solid. Kana iyo molekyuli huremu iri 200-600, imvura mukamuri tembiricha. Kana kurema kwemorekuru kuri pamusoro pe600, zvishoma nezvishoma inova yakasimba. Nemusiyano wehuremu hwemaoremu uremu, zvivakwa zvakasiyana zvakare. Kubva isina kuchena uye isina kunhuwa viscous mvura kune waxy solid. Nekuwedzera kwehuremu hwehuremu, iyo hygroscopicity dec ...
Polyethylene glycol uye polyethylene glycol fatty acid ester anoshandiswa zvakanyanya muzvizoro uye mishonga maindasitiri. Nekuda kwezvinhu zvakanaka zve polyethylene glycol, kusungunuka kwemvura, kusingachinjiki, muviri inertia, hunyoro, girizi uye kunyorova, ganda rakapfava, rinonakidza post post kunzwa kunzwa, nezvimwe. Iyo viscosity, kunyorova kwemanyoro uye chimiro chezvigadzirwa zvinogona kuchinjwa nekushandisa polyethylene glycol ine akasiyana mamorekuru uremu mamakisi. Polyethylene glycol (Mr <2000) ine relati ...
Peg-200: Inogona kushandiswa senge svikiro kune organic synthesis uye inotakura inotakura ine yakakwira zvinodiwa. Inogona kushandiswa seye humectant, solvent inowedzera inorganic munyu uye viscosity regulator mune yemazuva ese indasitiri yemakemikari. Inoshandiswa seye softener uye antistatic mumiriri mune yemachira indasitiri; Inoshandiswa seyeti yekumwisa muindasitiri yemapepa uye indasitiri yezvipembenene. Yakanakisa lubricity, mwando, disersibility, adhesives, antistatic vamiririri uye softeners; Kushanda: Mazuva ese makemikari: mushonga wemazino zvinodzivirira, munhu ...